खेलकुद Archives - Page2of 94 - न्यूज सञ्जाल
थ्री स्टार फ्रेन्ड्ससँग स्तब्ध, सरस्वतीलाई पहिलो अंक
न्यूज सञ्जाल २७ पुष २०७६, आईतवार १८:५१
काठमाडौं । उपाधि दाबेदारका रुपमा हेरिएको रुस्लान थ्री स्टार क्लब कतार एयरवेज सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको छैटौ चरणमा अर्को ललितपुरे क्लब एनआइबिएल फ्रेन्ड्ससँग स्तब्ध भएको छ । दशरथ रंगशालामा आइतबार थ्री स्टारलाई १-० ले पराजित गर्दै फ्रेन्ड्सले लिगमा पहिलो ...
विशालको गोलमा मछिन्द्र शीर्ष स्थानमा
न्यूज सञ्जाल २६ पुष २०७६, शनिबार १८:१५
काठमाडौं । सानमिगेल मछिन्द्र क्लबले कतार एयरवेज सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगमा शनिबार शीर्ष स्थान बनाएको छ । प्रभु बैंक जावलाखेल क्लबलाई १-० ले पराजित गरेपछि १३ अंक बटुलेको मछिन्द्र शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो । दशरथ रंगशालामा विशाल राईको गोलबाट ...
ए डिभिजन लिग : मच्छिन्द्र र जावलाखेल भिड्ने
न्यूज सञ्जाल २६ पुष २०७६, शनिबार ०८:४९
काठमाण्डौ । शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत छैटौं चरणका खेलहरु शनिबारदेखि सुरु हुँदै छ । पाँचौ चरणका जस्तै छैटौं चरणका खेलहरु सबै त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा हुने छन् । छैटौं चरणको पहिलो दिन शनिबार २ वटा खेल हुने छन् । ...
खोइ ! साग विजेतालाई पुरस्कार !
न्यूज सञ्जाल २५ पुष २०७६, शुक्रबार १९:२०
नमिता दाहाल, काठमाडौँ । १३औं सागमा नेपालले अहिलेसम्मकै ठूलो सफलता पाएपछि सरकारले विजेतालाई पुरस्कार घोषणा गर्‍यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा बोलाएर सगौरव गरेको घोषणा एक महिनासम्म कार्यान्वयनमा नआउँदा खेलाडीहरु भने निराश हुन थालेका छन् । मंसिर २५ गतेको ...
सताक्षी गोल्डकप : तयारीसँगै स्पोन्सर खोज्दै आयोजक
न्यूज सञ्जाल २५ पुष २०७६, शुक्रबार १५:३१
विनोद सापकोटा, झापा । तीन लाखभन्दा बढी दर्शकले हेर्ने माइपश्चिम झापाको लोकप्रिय सताक्षी गोल्डकपको तयारी सुरु गरिएको छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले फागुन पहिलो साताको खेल तालिका सार्वजनिक गरेपछि आयोजक सतासीधाम स्पोर्टिङ्ग क्लबले तेश्रो संस्करणको तयारी सुरु गरेको ...
लिनीङको साथमा थ्री अन थ्री वेष्ट बास्केटबल मंगलबारबाट
न्यूज सञ्जाल २५ पुष २०७६, शुक्रबार १५:१५
काठमाडौं । नेपाल बास्केटबल लिग (एनबीएल) थ्री अन थ्री वेष्ट प्रतियोगिता मंगलबारबाट सुरु हुने भएको छ । आयोजक नेपाल बास्केटबल लिग (एनबीएल) र प्ले फर डिप्राइभ्ड चिल्ड्रेन नेपाल (पिडिसिएन) ले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता पुस २९ गतेबाट सुरु हुने ...
झगडा गर्ने मनाङ र मछिन्द्रका खेलाडीलाई के कारबाही भयो ?
न्यूज सञ्जाल २४ पुष २०७६, बिहीबार १९:३६
काठमाडौं । सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगअन्तर्गत पाँचौ चरणको खेलमा झगडा गर्ने मछिन्द्र क्लब र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबका खेलाडीलाई के कारबाही भयो ? अहिलेसम्मकै चासोको विषय अब सकिएको छ । मनाङ र मच्छिन्द्रबीचको खेल लगत्तै भएको घटनालाई लिएर अखिल नेपाल ...
भलिबललाई नै राष्ट्रिय खेलको मान्यता
न्यूज सञ्जाल २२ पुष २०७६, मंगलवार ०८:५७
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले भलिबल खेललाई नै राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिएको छ । खेलकुदको बिकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न हिजो सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सरकारले चाहेको खण्डमा जुनसुकै खेललाई पनि राष्ट्रिय खेल ...
सात महिनापछि भीमनारायण गोल्डकपको हिसाब सार्वजनिक
न्यूज सञ्जाल २१ पुष २०७६, सोमबार १७:५६
धनकुटा । शहीद भीमनारायण गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको १४ औँ संस्करणको आयव्यय सार्वजनिक भएको छ। गत वैशाख २८ देखि जेठ ३ गतेसम्म सञ्चालन भएको प्रतियोगिताको ७ महिनापछि आयव्यय सार्वजनिक भएको हो। प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा २३ लाख १६ हजार चार सय ६ ...
४९ करोड लागतमा इलाममा रंगशाला बन्दै
न्यूज सञ्जाल २१ पुष २०७६, सोमबार ०८:५८
इलाम । इलाम नगरपालिकाले खेलमैदान निर्माणको लागि डीपीआर तयार गरेको छ । खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि व्यवस्थित खेल मैदानको अभाव भएकाले रंगशालासहितको खेल मैदान निर्माण गर्न इलाम नगरपालिकाले वडा नं. १० स्थित माइखोला टप्पुमा माइ भगवती रंगशाला निर्माणका लागि डीपीआर ...